Soocadde: “shacabka Sool meel ay joogaanba ha u diyaargaroobaan soodhoweynta ciidamada Puntland” (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 7, 2018 5:42 g 0
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Puntland, Maxamuud Xasan Soocadde, oo wareysii siiyey Radio Daljir ayaa sheegay in dawlada iyo shacabka Puntland ay ka go’antahay soocelinta dhulka ka maqan gacanta Puntland iyo xoreynta shacabka Sool.
Shaqsiyaadka u dhashay Puntland ee wali martida ku ah Hargeysa ayuu ku tilmaamay kuwo ku suntan taariikh madow oo xisaabtan dhab ah lala geli doono marka gacanta lagu soo qabto.
Ciidamada ku hawlan xoraynta gobolka Sool ayuu ugu baaqay in ay si wanaagsan ula dhaqmaan maxaabiista laga qabto ciidamada ay dagaalka kula jiraan isaga oo sheegay in aan lagu dayan Somaliland oo si bini’aadanimada ka baxsan loola dhaqmin maxaabiista dagaal.
Soocadde wuxuu sheegay in shacabka Sool meel ay joogaanba u diyaargaroobaan soodhoweynta ciidamada Puntland, qaybtoodana ay kaqaadanayaan halganka socda.
Soocadde waxa uu u warramay wariye Khadar Cawl, Daljir Buuhoodle.